Yako Yemagariro Midhiya Dambudziko Mhinduro Kuri Kukuvadza Basa Rako | Martech Zone
Mugovera, Kubvumbi 20, 2013 Svondo, Kubvumbi 21, 2013 Robby Kuurayiwa
Copyright Flickr mushandisi Craig Sunter
Pakange pasina kushomeka kwemagariro enhau zviitiko mukati mezvinoitika zvinosuwisa zviitiko muBoston. Yako Facebook neTwitter hova dzaive dzakawandisa nezviratidziro zvichiratidzira miniti-ne-miniti zviitiko zviri kuitika. Muchokwadi, zvizhinji zvacho zvaisazoita zvine musoro kunze kwechimiro.
Iko hakuna zvakare kushomeka kwemagariro enhau kushambadzira mamaki mamaneja avo vakapinda munzira dzakanaka panguva yedambudziko. Stacy Wescoe anonyora kuti: "Ini ndaifanira kuzvimisa ndoti, 'Kwete, vanhu havafanirwe kuzviona izvozvi,' uye ndokusiya peji rangu reFacebook risina chinhu kwezuva rese." John Loomer anoyambira "Meseji yekutengesa inogona kubuda seisina kuvimbika panguva dzino." Pauline Magnusson anoti, "Munguva pfupi yedambudziko, zvisinei, handizvo izvo vateereri vedu vari kuramba vachida."
Vazhinji munhu wese anopa kuraira kwakafanana, uyezve ivo vanotopa zano rakafanana neiro wekutanga mazita avo. Steven Shattuck inodaidza kuti "Pakarepo Disable Yakarongwa Tweets, Zvinyorwa uye maemail."
Sei? Nekuti seBlogHer's Elisa Camahort anonyora:
Hatidi kuve sangano rinotaura zvisina tsarukano nezve hunyanzvi hwevana, apo nharaunda yedu yakamirira kuti tione kuti vangani vana vakakuvadzwa kana kurasikirwa mukufurwa kwechikoro. Hatidi kuve sangano rinokurudzira zvakanyanya pamitambo yemitambo apo nharaunda yedu yakamirira kunzwa kubva kushamwari nehama dzavo kumarathon.
© Flickr mushandisi Craig Sunter
Mukuyedza kunzwisisa kuita uku, ndakawona zvakataurwa naMary Beth Quirk pa Mutengi. Iye anogadzira pfungwa inotevera:
Bhizinesi uye zvinotyisa zviitiko zvinokonzeresa mukurasikirwa nehupenyu hwevanhu hazvisanganiki.
Isu tese tinokanganiswa nedambudziko rakakura. Isu tese tine manzwiro. Iyo humdrum yezuva nezuva yezviitiko zvebhizinesi inongoita kunge isinganyanye kukosha kana isu tiri kubata nechinhu chinotyisa sehugandanga, njodzi dzinongoitika dzega, kana tsaona dzemumaindasitiri.
Ini ndinogona kunzwisisa chishuwo chekurega kushanda. Apo Mutungamiri Kennedy akaurayiwa (musi weChishanu), Chicago Tribune mishumo kuti neMuvhuro, angangoita mahofisi ese uye mazhinji mabhizinesi akavharwa, uye zvikoro zvizhinji nemakoreji zvakamisa zvidzidzo.
Asi kana iri nyaya yekubhomba uye kutsvaga kwevanofungidzirwa, ini handigoni kuwana zvinyorwa zvemunhu anomira kana kunonoka kuita bhizinesi kunze kweBoston (kunze kwenzvimbo dzekuchengetedza). Wese munhu akaenderera mberi nekutsvaga uye kusimudzira, kumhanyisa zvigadzirwa, achienda pakutengesa mafoni, kuita ongororo yezvemari, kunyora mishumo, kushandira vatengi, uye kuendesa zvigadzirwa.
Mativi ese ebhizinesi akaramba achimhanya kusara kweimwe. Isu tinofanirwa kumisa mishambadziro yedu yekutengesa - kunyanya yedu evanhu vezvenhau mishandirapamwe yekushambadzira-panguva yedambudziko.
Nei kushambadzira kwakasiyana pane mamwe mabasa ebhizinesi? Kana "zviitiko zvebhizinesi nekushungurudza zvikasabatana" saka sei isu tisinganonoke chinhu chose pasi? Nei mamaneja mazhinji emakambani achifunga kuti vanofanirwa kumira kushanda kana nyika yakanangana nedambudziko guru? Havafanirwe kudyara mamaneja, vatengesi vekutengesa, maneja accounting uye nevamwe vese havaite zvakafanana?
© Mushandisi weFlickr khawkins04
Vashambadziri havasi vakawanda kana vashoma kupfuura vamwe vese. Kana tikasarudza kuvhara mameseji edu enhau, isu tirikureva izvozvo munhu wese anofanira kunge achitarisa padambudziko kana isu tiri kuti hatina kukosha kumabhizimisi edu.
Kana zviri zvekare, kunyarara pasocial media zvinoreva kuti isu tinofunga nezve vashoma vevanhu mune mamwe mabasa avo vachiri kuita mabasa avo pane kutarisisa zviri kuitika.
Kana zviri zvekupedzisira, tiri kuti kushambadzira hakuna kukosha semamwe mapoka mumakambani edu. Muchokwadi, ini ndinofunga sevashambadziri isu tinowanzo kuve nemaonero akasarudzika ezvedu kukosha. Izvi zvakave pachena apo ini ndaiyedza kukurukura nyaya yacho online:
@chakabera Ndizvo. Munguva yedambudziko tinofanirwa kuungana, uye tichimisa nekuratidzwa kwemafuta enyoka. @kubira
- Muzvinafundo Tiki Ohana (@tikikitchen) April 17, 2013
Saka heino yangu runyorwa rwemaitiro akanakisa panguva yemagariro enhau. Iwe pamwe haubvumirani. Ndozvakataurwa ndezve:
Kutanga, taura neako manejimendi kuti uone kunze kwekambani iri kuvhara kana kudzikisa mashandiro - Kana ivo vari kuronga kuvhara nekukurumidza, tumira vashandi kumba, kana kudzikisa zviitiko, kushambadzira kwako kunofanira kuderedzwa zvinoenderana. Uye iwe uchave uine basa rekutaurirana iyi sarudzo kuruzhinji zvakare.
Chechipiri, wongorora yako yese yekutengesa nzira yezvinhu zvinogona kunge zvisina basa. Chitoro chinoratidzira icho chinoti zvigadzirwa zvako "DA BOMB" zvinongogumbura se tweet ine izvo zvakafanana zvemukati. Enderera kuongorora zviitiko sezvavanowanda kuti iwe ugone kugadzirisa sezvazvinodiwa. Usangorega meseji dzese dzakarongwa, kunze kwekunge kambani yako iri kuvhara mabasa ese ebhizinesi.
Chechitatu, wongorora hukama hwebhizimusi rako neindasitiri yako padambudziko razvino. Kana iwe ukagadzira michina yemitambo, iyo marathon bhomba inogona kukukurudzira iwe kutsiva mamwe ako ekuzivisa mameseji nekuedza kusimudzira ruzivo pamusoro pemasangano aunotsigira ayo akasungirirwa padambudziko. Kana, iwe ungangoda kutsvaga nzira yekubatsira zvakananga. (Semuyenzaniso: zvakaitwa naAnheuser-Busch mumashure meDutu Sandy.)
Chechina, chenjera nezvekutaura zvaunofunga. Wese munhu anoziva kuti munhu wese ari kufunga nezveavo vakawirwa nedambudziko razvino. Kunze kwekunge iwe uine chimwe chinhu chekuwedzera pamusoro pe "Mwoyo yedu inoenda ku…" pamwe haufanire kutaura chero chinhu sechiratidzo. Iwe haufanirwe kuita Epicurious kana Kenneth Cole. Uye iwe unofanirwa kungo tsanangura izvo zviri kuitwa nekambani yako mukupindura kana iyo ruzivo ikabata vatengi vako nevamiriri.
Semuenzaniso, kana iwe uchipa mupiro wezvemari, usataure nezvazvo panguva yedambudziko. Asi kana vashandi vako vachizopa ropa, rega vanhu vazive kuti kuchave nekunonoka kudzosa mafoni uye maemail.
Mhinduro yako yemagariro enhau iri kukuvadza basa rako. Kana iwe ukaita izvo zvinotaurwa nenyanzvi uye wovhara mameseji enzira dzese mashandiro. Sarudzo mbiri idzi dzinoratidza zvisirizvo nezvebasa.
Ngatiitei kushambadzira mugari wekutanga kirasi. Ngatishandei nevamwe vanyanzvi mune mamwe makosi kuti tiite nenzira kwayo, kuronga zvine hungwaru, uye kuzvibata zvine hunhu.
Inzwa wakasununguka kusawirirana pazasi.
Tags: dambudziko rekushambadzirakushambadzira uziviMarketing nziraSocial Media Marketingpasocial media nhamo
Smartfile: Whitelabel Yako Yakakura Faira Solution
Apr 20, 2013 pa 11: 45 AM
Mhoro Robby -
Ini ndinotenda kwazvo kuti iwe unonditora muchidimbu chako, uye ndinofunga kuongorora kwako kwezvinhu zvakaoma zvinobatanidzwa mukushandura meseji yekutengesa munguva yedambudziko renyika kwakakodzera.
Izvo zvakati - Ini handisi kuzobvumirana newe.
Unonyora, "Kana tikasarudza kuvhara mameseji edu enhau, tinenge tichiti munhu wese anofanira kunge achitarisa padambudziko kana tiri kuti hatina kukosha kumabhizinesi edu."
Ini ndinofunga icho hunyengeri hunyengeri - idzodzo hadzisi idzo chete mameseji anogona kunge ari kutaurwa nesarudzo yekumisa otomatiki mushambadziro wekushambadzira panguva yedambudziko.
Ini pachangu, kucherechedzwa kuti pakati pevateereri vangu, pane vangangoita vanhu mumatanho akasiyana enhamo. Uye vamwe vanogona kunge vasiri kuchema zvachose. Asi nekuda kwekuoma kwekuita kwevanhu kunjodzi nekurasikirwa, kunyanya padanho rakakura, ndinotenda mhinduro chete yetsika kuedza kusawedzera kusuruvara kwemumwe munhu neshoko rekushambadzira rakazvimiririra iro rinogona kunge riri glib, kuzvimba, kana zvimwe zvinokuvadza mumwe munhu ari mukutambudzika - kunyanya achiziva kuti pane mukana wakanaka wekuti * vazhinji * vevateereri vangu vari mukutambudzika.
Hazvina kunyanya kuti ndinotenda ndinogona kunangidzira vateereri vangu panofanirwa kutariswa. Ndezvekuti ini ndine tariro ivo vanhu vane hupenyu huzere, hwakapfuma uko vanhu vane basa kupfuura purofiti. Ndinovimba bhizinesi rangu hachisi icho chakanyanya kukosha munyika yavo, uye ini ndinosarudza kugadzirisa yangu yekushambadzira meseji zvinoenderana nedambudziko.
Kwangu neumwe wangu, nepo isu tichivhara mameseji edu enhando, hatina kurega kutaurirana nevateereri vedu. Taiziva kuti isu taifanira kuve kunyanya maoko-ekuteerera vateereri vedu. Panzvimbo pekuyedza kukurumidza kuchinjanisa mameseji akaomarara. Zviri nyore kupomhodza otomatiki akateedzana e "ekutanga ekukurukurirana" sezvo zvemagariro midhiya zvemukati zvinowanzo kuve uye kutumira mashoma mashoma epamoyo anovandudza, pamwe nekutarisa pane yemhando kubatana. Kwatiri, iyi yaive mhinduro yedu yakasarudzwa kune izvo vateereri vedu vakaratidza kudiwa nazvo.
Yedu yekutanga yekuvandudza mushure mekubhombwa kwaitika yaive yakapusa graphic yemumhanyi ane chinyorwa chinoratidza minamato yedu kunharaunda yeBoston uye vamhanyi veiyo marathon. Nemaonero anopfuura makumi masere (pamusoro pe80,000K mumaawa mashoma), ndinopokana kuti yaive meseji yekushambadzira yaisangana nevateereri vedu nenzira yakafanira kupfuura kungorega mameseji edu otomatiki achienderera aizove.
Kwatiri, kukosha kwechokwadi sechiratidzo kwakakosha kwazvo, kwete chete munguva dzenjodzi, asi nguva dzose. Sechiratidzo, zvakakosha kuenzanisa zviito zvedu neavo vatinoti tiri, kushandisa tsananguro yaSeth Godin yechokwadi. Isu tiri vanhu vane hanya zvechokwadi nezvevatengi vedu - kwete sekungowana mari, asi sevanhu chaivo vane manzwiro chaiwo, mamwe acho akaomesesa munguva dzenjodzi nekusuwa. Kuva vechokwadi kwatiri kunosanganisira kuve nechokwadi chedu chekushambadzira meseji inopindura kune izvi nenzira yakaoma panguva yedambudziko renyika nekushungurudzika.
Mune dzimwe nzira - ungatotaura kuti kumisa otomatiki kushambadzira meseji mune yakadaro nguva inobuda mukuremekedza iro rakakura simba rebasa rekushambadzira, asi nesimba rinouya mutoro wekurishandisa zvine hungwaru.
Kutenda nekutanga kutaurirana - iwo musoro wakanyanya kukosheswa, ndinofunga.
Apr 20, 2013 pa 1: 22 PM
Kutenda nemashoko, Pauline
Pfungwa yangu ndeyekuti kumisa mameseji enjodzi panguva yedambudziko nekuti "kune zvimwe zvinhu zvakakosha zvekushushikana nezvazvo" zvinoita kunge zvisingaenderani nenyaya yekuti hatimise zvese zvimwe zviri kuitwa nebhizinesi redu. Sei kuramba uchishambadza kusinganzwisisike pane kuenderera uchitengesa, kuenderera mberi kutarisira kuti vanhu vasvike kubasa nenguva, kana kuramba uchivhurika kuruzhinji?
Ini handipikisane zvachose nemabrands kuva echokwadi. Ini ndinofunga pane zviitiko izvo patinofanirwa kudzora nyika kutarisa kubva kune ese matunhu ebhizinesi kuenda kunjodzi. Ndosaka ini ndichireva kurasikirwa kweMutungamiri Kennedy.
Chandinetsa ndechekuti kusawirirana pakati pehunhu hwevashambadzi nehunhu hwedzimwe tsika mubhizinesi. Ini ndinofunga kusawirirana inokuvadza basa nekuti inogona kuita kuti vashambadziri varatidzike sevasina kukosha kana kuita kuti vaonekwe sevanonyanya kufunga.
Ndiri kuda kushambadza kuti ndiwane rukudzo rwakawanda. Kuderedza ruzhinji rwekushambadzira zviitiko panguva apo mamwe makosi mazhinji arikuenderera nekushanda nekumhanya kuzere senge kuchasimbisa kushambadzira semugari wechipiri mugari.
Apr 20, 2013 pa 1: 57 PM
Ini ndicharamba ndichiramba. Iwe unonyora, “Ndiri kuda kushambadza kuti ndiwane rukudzo rwakawanda. "Kuderedza kushambadzira kweruzhinji panguva iyo mamwe mabara ari kuenderera mberi achimhanya sezvichasimbisa kushambadzira semugari wechipiri."
Kutendeseka, ndinotenda kuti zvinopesana ndezvechokwadi. Kuitisa bhizinesi seyakajairwa kushambadza zviitiko panguva yedambudziko renyika kunoderedza ruremekedzo kunevashambadzi - kuti ichasimbisa maonero eruzhinji ekushambadzira seakanyanya kudhora remasimba ese zvekuti havana hanya nezvinodiwa zvechokwadi uye nemanzwiro evatengi vavo. . Mune bhizinesi rangu, mhinduro kubva kune vatengi vangu yakasimudzira maonero angu. Uye nokutendeseka - tiri bhizinesi diki, isu takamisa mamwe mashandiro. Uye kuve aive maneja weHR muhupenyu hwapfuura, ndinofungidzira kuti paive nemamwe mabasa mazhinji ebhizinesi anga asiri kuitika Muvhuro masikati. Ini handina manhamba ekutsigira nyaya iyi neimwe nzira, asi chero mutungamiri akangwara mubhizinesi angadai akaongorora izvo zvaidiwa nevashandi vake panguva iyoyo, uye izvo zvingangodaro zvaisanganisira kurega vamwe vanhu vachienda kumba nekukurumidza kana zvichibvira. Basa rakakosha, asi pasina vanhu (vatengi kana vashandi), chinangwa hachiitike.
Chii chiri chinangwa chekushambadzira? Kuratidza kukosha kwayo kana kukurudzira mutengi kuti aite sarudzo yakanaka zvine chekuita nechiratidzo. Kana iri yekutanga, saka chokwadi, Tweet on. Kana iyo yekupedzisira, ini ndinofunga zvakasimba kumbomira kuti uwane kupisa kwemusika uye kupindura nenzira kwayo kungave kunoshanda. Iwe unogona kupokana zvese zvaunoda nezvekukosha kwekushambadzira seyakavanzika chinhu. Ini ndichaita nharo sekushuvira kuti kushambadzira hakusi magumo asi nzira yekumagumo. Uye ini handizvione sekushomeka kwekuremekedza iro basa mune zvishoma.
Semuenzaniso - mumota mangu, peturu ndiyo nzira yekuenda kumagumo. Ndinozviremekedza zvikuru, asi pachazvo, pasina mashandiro emota, hapana zvazvinoita. Uye pasina iyo, mota yangu haimhanye. Kutariswa kwakasarudzika pahunhu hwepeturu yangu pasina kutariswa kwakabhadharwa kune mamwe masisitimu ari mumota yangu hakuite kuti mota yangu imhanye zvakanyanya.
Apr 20, 2013 pa 2: 11 PM
Kwandiri, mucherechedzo unomira kuburitsa zvigadzirwa zvawo asi uchiramba uchigadzira, cheni yekutengesa kofi inomira tweeting asi ichiramba ichitengesa kofi - ndiwo mabhureki andinorasikirwa neruremekedzo. Zvinoita sekunge vari kuenda nekushambadzira kazhinji, asi vanonzwa kuti vanofanirwa kudzikisa vhoriyamu panguva yedambudziko.
Handifunge kuti kushambadzira chinhu chakazvimiririra. Ini ndinofunga iyo (inofanirwa kuve) yakabatana zvakabatana netsika yekambani uye hukama hwayo nevatengi vayo nevamiriri.
Ndosaka ini ndichida kuona zvigadzirwa zvichiita sarudzo dzakazara, pane kusarudzika kune dhipatimendi rekushambadzira chete. Ini ndinofunga kuita kudaro kuchawedzera kuremekedzwa kwekushambadzira, nekuti iyo kambani ichave iri papeji rimwe chete pachinzvimbo chekungotarisa senge iri kutumira kuti iwedzere ruzhinji maonero.
Apr 20, 2013 pa 2: 52 PM
Iwe unogona kungove wakasarudzika mukuona kwako, Robby! Kukurukurirana kukuru!
Apr 20, 2013 pa 12: 11 PM
Ndinofanira kubvumirana naPauline. Ndichiri kufunga kuti zvakakosha kuti tizive zvinoitwa nemakwenzi edu pa auto-mutyairi (verenga = zvakarongwa), panguva imwechete isu tinofanirwa kuyeuka kuchengetedza zvinhu muchirevo.
Haasi ese mabhizinesi ari kuzokanganiswa nenzira imwechete nenjodzi yenyika. Mhinduro yeruzhinji haidiwe pamhando yega yega, asi zvinoenderana nebhizinesi / musika wega. Kana iwe uri mugadziri wezvipfeko zvevana kana kambani yemoto, iwe unogona kunge uine akasiyana masocial media kupindura kuzviitiko zveBoston maringe nekambani inomirira kana nzvimbo yekugadzirisa mota. Saizvozvowo, iyo yekugadzirisa mota nzvimbo inogona kuda kutarisa yavo yeruzhinji meseji kana paitika tsaona inosanganisira mota bhomba.
Panyaya yekunonoka kwekushambadzira midhiya enhau munyika yese yezvigadzirwa, ini ndinogara ndichifunga icho chisarudzo chakangwara. Ehezve, izvo zvinofanirwa kuyerwa pamusoro pekuti ingani kushambadzira iyo yakapihwa brand inoita. Kambani yangu, semuenzaniso, inoita shoma yekushambadzira midhiya parizvino, saka kumisa yedu digital digiti kutozosvikira mushure mekunge zviitiko zvakakosha zvedambudziko zvapera zvinogona kuuraya chero mukana kune veruzhinji watinoita, sezvo 100% yeshoko redu iri yakagadzirwa online.
Iyo yakareba uye ipfupi pairi ndeyekuti iwo mutsara wakanaka kufamba. Muchokwadi, muridzi webhizimusi akangwara anozoziva zviito zvehungwaru zvekutora maererano neshoko ravo kuruzhinji munguva dzekutambudzika. Uye pakupedzisira, nderuzhinji rwunozofunga kana zviito zvakatorwa neicho chiratidzo zvaive mukuravira kwakanaka.
Apr 20, 2013 pa 1: 28 PM
Kutenda nemashoko, John.
Mutsetse wakanaka kufamba. Ndiri kunetsekana zvakanyanya pamusoro pekuremekedzwa kwebasa rekushambadzira kupfuura zvandiri mukukurukura zvakanakira rimwe bhizinesi. Ini ndinofunga kuti bhizinesi rinofanira kuratidzira zviri kuedza. Kana ivo vachienda vakanyarara online, ivo vangangodaro vatarise kuvhara masuo avo mune mamwe madhipatimendi futi.
Wataura chokwadi kuti veruzhinji vanozofunga kana zviito zvakatorwa nechiratidzo zviri mukuravira kwakanaka. Asi isu tatozviziva izvozvo veruzhinji hava vimbe nemhando zvakawanda kutanga nazvo.
Imwe yedzakanakisa nzira dzekuratidzira kuvimba ndeyekuenderana. Kambani yakavhara kwemaawa mashoma kuti ipe ropa uye nekuvandudza yavo mameseji epamhepo kuti iite kudaro yaizoratidza kusagadzikana. Kambani inomisa kushambadzira kwese asi inogara yakavhurika neimwe nzira inoratidza kuti mameseji avo haasi epakati petsika yavo.
Apr 20, 2013 pa 1: 39 PM
Kutenda nemhinduro Robby.
Ini ndinobvuma kuti bhizinesi rinofanira kuratidzira kushanda kwaro, zvisinei, nekuda kwekuti bhizimusi rinomisa kusimudzira kwezvakagadzirwa kwenguva yakati rebei, hazvireve kuti rinoderedza kambani yemabasa ayo mune dzimwe nzvimbo. Dai ndaizomisa kushambadzira nekuda kwedambudziko renyika, hazvireve kuti ini handisati ndave nevatengi varipo kuti varambe vachifara. Ini ndinoda kushandira avo vatengi vandakatora pane basa kuti ndigare ndichifara.
Ichi ndicho chikonzero nei vatengi vasingavimbi nemhando dzekutangira. Ini zvakare ndinofunga ine LOT yekuita nenyaya yekuti mazhinji emakampeni ekushambadzira chaizvo haana kutarisisa pane zvinodiwa nemutengi. Maitiro andinozviona ini, ndezvekutsvaga hoko yepfungwa kuti vatengi vagovane nemari yavo. Ini ndakamisa bhizinesi rangu zvakasiyana. Kuti uwane kuvimba kwevatengi, iwe unofanirwa kusvika pakuvaziva padanho rega. Iwo chirevo amai-uye-pop mabhizinesi ndiwo muenzaniso mukuru weizvi. Ivo vanoziva mabatiro evatengi sevanhu, kupesana nekuvaona sechiratidzo chemadhora chakangopinda nemusuwo - uye ndizvo zvinozogumbusa vatengi pavanotanga kutenga kuchitoro chikuru chebhokisi vs. bhizinesi diki pasi pemugwagwa . Chii chinoitika? Iyo 'mukomana mudiki' anoenda kunze kwebhizimusi uye zvese zvasara ndiro hombe bhokisi chitoro uye isu tese tinoziva kuti mhedzisiro ndeipi: kushomeka kwemakwikwi emaketani makuru uye ivo vanotanga kukwidza mitengo mukudzosera kumashure zvinoenderana nebasa revatengi. Zvinova zvekutengesa nekuita mari uye kwete zvekushandira mutengi.
Saka, ini ndinosiya. Iyo poindi ndeyekuenderana uye ini handidi kunzwa kuti nekuti imwe nzvimbo yekambani inogona kukanganiswa, zvinoreva kuti tinofanirwa kumisa zvachose mamwe mabhizinesi mabasa. Kushambadzira kuri kuwanda, asi kana iwe uine zviripo zvisungo zvekuzadzisa, zvakakosha kuti unzwisise kuti izvo zvisungo zvinofanirwa kuzadzikiswa.
Apr 20, 2013 pa 2: 01 PM
Kubvumirana, John. Kunyangwe semuridzi webhizimusi diki uye aimbove maneja weHR, iniwo ndakaringana nekuyedza zvido zvevashandi vangu uye / kana makondirakiti mune yakadai uye nekubvumira vamwe kutora zororo kana kuenda kumba nekuda kwechiitiko chisina kujairika kana zvichidikanwa iva. Zvirokwazvo tine zvisungo kune vatengi vedu. Asi - vanhu vanondibvumidza kusangana nemishoni yangu zvese zvakakosha kwandiri sezvinoita vatengi vangu.
Muzvinafundo Tiki Ohana
Apr 22, 2013 pa 9: 46 AM
Ini ndinobvumirana neichi chirevo.
"Ndinofungawo kuti ine ROTI ine chekuita nenyaya yekuti mishambadziro mizhinji yekushambadzira haina kunyanyo tarisa pane zvinodiwa nemutengi"
Ichi ndicho chikonzero ini ndinofananidza kushambadzira kwakawanda kune mota dzemafuta enyoka, kana kunyanyisa kudzoka kumazuva ePT Barnum. Kushambadzira hakutarise pane zvinodiwa nevatengi. Panzvimbo iyoyo inotaurira mutengi "Unoda izvi." Kusafara? "Unoda Brand-X!" Iyo yechinyakare modhi. Mazwi anochinja, nzira dzekuratidzira dzinoshanduka, asi pakupedzisira meseji ichiri yakafanana. "Unoda izvi." Kana chiri muchokwadi, ini handidi izvozvo.
Chiratidzo chandichavimba nacho, ndicho chiratidzo chinoratidza kutanga mune zvemagariro pamusoro penzira yazvo - uye vashoma. Ini handisi kuti mabrand anofanirwa kuvhara iwo mameseji. Ingo kudzora pasi zvoga zvinhu, uye bvumira kune zvimwe kutonga kwevanhu. Nekudaro, sekutaura kwawamboita dzimwe nguva izvo zviri nyore kwazvo ..
Robby, iwe unounza yakawanda yakanaka mapoinzi. Ini 'handifunge kuti bhizinesi rinoda kusvika pakumisa, asi kushambadzira kunofanirwa kuziva kuti pane nguva nenzvimbo, uye meseji yako inogona kusimba nemabatiro aunoita padambudziko pane kuchengetedza kuwanda. Kushambadzira kwekushambadzira kunoonekwa kunge kusingafungire, uye kunopesana nehukama hwevanhu. Kugadzira kushambadzira mugari wekutanga kirasi, inofanirwa kuenderana nemafungiro ehurumende basa uye mutoro. Izvi zvinoreva kuisa nharaunda seyese yekutanga, uye ingobvumidza vanhu kuti vakutsvage nekushinga pavanenge vachida. Funga nezve chiitiko chevanhu chiri kuitika, uye tora chigaro chekumashure kune zvakakosha zvinhu.
Nekudaro, saJohn naPauline, ndinofunga mumwe wemutsauko mukuru pakati pekutengesa (kunyanya kushambadzira midhiya yenhau) ndeyekuti zvitoro zvinogara zvakavhurika zvichizadzisa chinodiwa, kunyangwe iri nzvimbo yekuungana chete.
Ini ndinofungidzira nyaya yangu ndeyekuti, kunyanya nema automated tweets, tinofanirwa kufunga nezve vatengi zvavanoda. Nekuti kana tikasadaro saka zvese hazvisi chinhu nemafuta enyoka panguva iyoyo.